ဒေါ်လာသန်း ၁၃၀၀တန်ထီ Powerball Jackpot | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » ဒေါ်လာသန်း ၁၃၀၀တန်ထီ Powerball Jackpot	10
ဒေါ်လာသန်း ၁၃၀၀တန်ထီ Powerball Jackpot
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 10, 2016 in Community & Society, Money & Finance | 10 comments
ယူအက်စ်မှာ ပါဝါဘောလ် အမည်ရှိ ထီဆုကြေးဟာ ယခုဆိုလျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၃၀၀သန်း) အထိရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ပေါက်တဲ့သူ မရှိရင် ဆုပမာဏာ တိုးတိုးသွားတာမို့ ဆုငွေ ဒီလောက်ထိ များသွားရခြင်းပါ။ ယနေ့ စနေမနက် ထီဖွင့်စဉ် ဆုကြေး ဒေါ်လာသန်းရှစ်ရာပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကံထူးယှဉ် မပေါ်တာမို့ ပြီးတော့ ဆုကြေးမက်လောက်တမို့ ယခင်ထက် လူအများ စုပြုံထိုးကြရင်း အခုလောက် ပမာဏ ဖြစ်သွားရတာပါ။ ကံထူးရှင်အနေနဲ့ ဆုငွေကို နှစ်၃၀ ခွဲယူလျင် အပြည့်ရမည် ဖြစ်ပြီး တလုံးတခဲတည်း ယူမည်ဆိုပါက တဝက်ရမှာ ဖြစ်သည်။ အဲဒီတဝက်ကိုလည်း အခွန်ပြန်နှုတ်အူးမှာမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တဝက်ရဲ့ ၆၀%တော့ ကျန်ပါလိပ်မြည်း။
ပါဝါဘောလ် သာယာမျော
အခုထီ ပေါက်ကိန်း တွက်ပြထားတာ ၂၉၂.၂သန်းမှာ ၁ ပါတဲ့ခများ။ အခြား ဖြစ်တန်ကိန်းတွေ ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ…
လေယဉ်ပျက်ကျတဲ့အထဲပါဖို့ ၁၁သန်းမှာ ၁
မိုးကြိုးအပစ်ခံရဖို့ ၇သိန်းမှာ ၁
စကိုင်းဒိုင်ဗင် ခေါ်တဲ့ အမြင့်ကနေ ဟိုးအောက်ထဲ ခုန်ချကစားရင်းသေဖို့ ၁၀၁၀၈၃မှာ ၁ ရှိပါတယ်။
ထီလက်မှတ်တန်ဖိုး တစောင် ယူအက်စ်၂ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါသည် ခညား… နောက်တကြိမ်ထီဖွင့်ရက်မှာ လာမည့် ဗုဒဟူးနေ့ ည ၁၀း၅၉ မိနစ် အရှေ့
ဖက်ခြမ်း စံတော်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ကံကောင်းကြပါစေ ဦးကြောင်ကြီး မစ်တာဝေသည်.. သာမီးလေးတို့ ဖေါ်နိုင်ကြွားနိုင်ကြပါစေ။
Powerball is now breaking jackpot records and has hit $1.3 billion
Ticket holders havea1 in 292.2 million chance of winning
– chance ofaplane crash – 1 in 11 million
– chance ofalightning hitting you – 1 in 700,000
– chance of dying from skydiving – 1 in 101,083 jumps
Why not pick upaticket for $2 and dream of what you would do with the extra money.
Next Powerball picks are coming up Wednesday 10:59pm ET
kai says: ၇၀၀ ကထဲကထိုးထားတာ.. ပိုက်ပိုက်တွေပလုံ…ပလုံ…
အခု.. ၁.၃ ဘီလီယန်ဒေါ်လှဖြစ်တာမှာ.. ကျုပ်ပိုက်ပိုက်လည်း.. ရောပါသွားသဗျ..
ရွာသူားထဲက.. ဗေဒင်ဆြာ.. နက္ခတ်ဆြာတွေလုပ်ကြပါဦး..
ပေါက်ရင်.. အင်ယားလမ်းမှာ တဧကခြံကို.. ဖယ်ယာရီတစင်း.. အိမ်အကူ ၃ယောက်တသက်စာစရိပ်ငြိမ်းနဲ့.. ၀ယ်ပေးမယ်လေ..။ :K:
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ၂ နဲ့ ၅ မြူး မဟေ့
အလယ်ထိုင် မ ဂဏန်းဟေ့
ရှေ့သုံးလုံးပေါင်းခြင်းက ၁၀ ဘရိတ်ဟေ့
ရှေ့လေးလုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ နတ္ခတ်က နောက်ဆုံးအလုံးဟေ့
စုံထိပ်စီး မထိပ်စီး ဇီးသီးဆွဲဟေ့
ပေါက်ရင် ဗိုးဗိုးမြောက်ကို ဘလက်လေဘယ် ဘလူးလေဘယ် ကြက်ကြော်ဝက်ကြော်ဇရက်ကြော်
မပေါက်ရင် လှူဒယ်လို့ ဒဘောထားဟေ့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဘာပြောပြောဆုကြေးကများတော့ကံကိုတော့စမ်းသင့်ပါတယ် သဂျီးရယ်..ထိုးထားတော့စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သပေါ့ .မြန်တျန့်က ကွန်ဒိုတောင်ဝယ်မရတဲ့ အောင်ဘာလေထီတောင် စိတ်ကူးယဉ်နိုင်အောင်ထိုးနေရသေးတာ
အောင် မိုးသူ says: ထီဆိုတာကလည်း ရှေ့ကုသိုလ်ကံ တော်တော်ကောင်းမှ ပေါက်တာပါ။ ဒီမှာလည်း စကိုင်းနက်ကလာတဲ့ ကြည့်ရင်ထောမယ် အစီအစဉ်ကလည်း မပေါက်မချင်း ဆုငွေတိုးသွားတယ်။ ခုတောင် တော်တော်များနေပြီ။
alinsett says: အနော့်အတွက် တစ်စောင်လောက် စိုက်ထုတ် ထိုးပေးထားမား.. အူးကြောင်…
.ပေါက်ရင်… အဲ့ ၂ ဒေါ်လာကို ငါးဆ ပြန်ပေးမယ်လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေါက်ရင် မမေ့နဲ့နော်။
Ma Ma says: သဂျီးပလုံထားတာတွေ အဟောသိကံမဖြစ်ရလေအောင် ကံစမ်းထားတယ်။
ခုကတည်းက အရီးတော်ထားကြ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: အဲဒီထီစနစ်က… ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ထိုးလို့ရတယ်…။
ဟိုးးးးးးးးး အရင်က.. မြန်မာတွေအတွက် .. အဲဒါကိုကိုယ်စားထီထိုးပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ပေးဖို့တောင်စဉ်းစားမိသေး..
မြန်မာထီလျှော်ငွေထက် အဆထောင်ချီသာတဲ့ ယူအက်စ်ထီကို.. ခုလုပ်စားရင်လည်း ရနိုင်သေး..
အင်တာနက်နဲ့လုပ်လည်း ရသမို့.. ဘယ်သူတွေ အဲဒီဘစ်ဇနက်စိတ်ဝင်စားသလဲ…။ ?
Ma Ma says: စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဒီမှာ စင်္ကာပူထီတွေတောင် ရောင်းနေ ထိုးနေကြတာ။
kai says: The winning Powerball numbers were drawn Wednesday night: 8, 27, 34, 4, 19 and the Powerball of 10.
California lotto officials tweeted almost immediately after thatawinning ticket was sold in the state. Later, California Lottery spokesperson Russ Lopez said there were two more winning tickets sold, one in Tennessee and one in Florida.